Torohevitra 18 manan-danja indrindra daty voalohany aorian'ny fihaonana amin'ny olona an-tserasera - Fifandraisana
Torohevitra 18 manan-danja indrindra daty voalohany aorian'ny fihaonana amin'ny olona an-tserasera
Nahita olona an-tserasera ianao, ary manana daty ao amin'ny diary.
Raha mamaky an'ity ianao dia angamba somary mitebiteby kely amin'ny fihaonana amin'izy ireo voalohany.
Tsy maninona na veterans fampiharana / tranokala ianao na ity no tanjonao voalohany amin'ny tontolon'ny fiarahana amin'ny Internet dia niseho ny lolo.
Ary ara-dalàna tanteraka izany.
Matahotra daholo isika alohan'ny daty, ary ny lafiny nomerika amin'ny fomba nihaonanao tamin'ity lehilahy / tovovavy ity dia afaka manampy tadim-poatra fanampiny. Ny tsy fantatra dia mampatahotra kely foana.
Raha mitebiteby ianao, dia mety noho ianao tsy dia ‘mahay’ loatra amin'ny daty amin'ny ankapobeny. Na mety noho ianao tsy azonao antoka hoe hafa ny etika sy ny protokolita rehefa nifandray tamina saika ianao fa tsy nihaona mivantana.
Fa miala sasatra. Satria efa nihaona tamina olona an-tserasera ianao dia tsy midika izany hoe mila miasa mafy amin'ny fihaonana amin'izy ireo ianao.
Tokony hampiala voly ny mampiaraka fa tsy raharaha na zavatra mahafa-po anao. Tokony hanana lolo ianao, fa tsy ny vovobony rehetra.
Vakio amin'ny alalan'ireto toro-hevitra kely ireto hahazoana antoka fa mandeha amin'ny fomba rehetra araka izay azo atao ny mampiaraka voalohany amin'ny olona nihaona taminao tamin'ny Internet.
Raha mitady hitebiteby amin'ny daty amin'ny ankapobeny ianao dia tsy afaka manome toky aho fa hampitony ny hozatrao tanteraka ireo torohevitra ireo…
… Saingy tokony hanampy anao hahatsapa ho vonona sy matoky tena izy ireo ary hankafy ny traikefa fotsiny.
Rehefa dinihina tokoa, tsy fantatrao izay hitranga. Ny daty voalohany manaraka anao dia mety hanome anao tantara mampihomehy fotsiny hotantarainao, mety hiteraka finamanana vaovao izany, mety ho fiantombohan'ny fifankatiavana izany, ary mety ho ny daty voalohany farany hitanao koa izany!
1. Raiso haingana ny zavatra ivelan'ny tranonkala.
Aza mandany herinandro miresaka amin'ny olona an-tserasera alohan'ny fihaonana amin'izy ireo mifanatrika.
Mazava ho azy fa, raha tsy misy antony azo ampiharina fa io ihany no safidy (oh: any amin'ny toerana samihafa ianao izao no miasa na manao vakansy).
Mora kokoa ny manombana raha misy olona mety ho mpiara-miasa rehefa tena mihaona sy miresaka aminy mivantana ianao.
2. Aza lany amin'ny lohahevitra rehetra ny resaka alohan'ny fihaonanao.
Fahadisoana lehibe ataon'ny olona sasany amin'ny fiarahana amin'ny Internet dia ny firesahana maharitra sy amin'ny antsipiriany amin'ny alàlan'ny fampiharana na lahatsoratra.
Mandrakotra seha-pifanakalozan-kevitra marobe izy ireo, saingy avy eo mahita fa tsy misy zavatra betsaka azo resahina rehefa mihaona izy ireo amin'ny farany.
Ambonin'izany, ny olona dia afaka maneho ny heviny amin'ny alàlan'ny lahatsoratra amin'ny fomba hafa amin'ny fomba fanaony amin'ny tena fiainana. Raha mandany fotoana be dia be amin'ny firesahana amin'izy ireo amin'ny Internet ianao, dia mety hanana fiheverana diso momba ny toetran'izy ireo.
3. Raiso amin'ny Internet ny resaka an-tserasera.
Ny lakile dia ny manomboka resaka an-tserasera ary avy eo milentika bebe kokoa amin'ny antsipiriany raha vao mifanatrika eo amin'ny tena fiainana ianao.
Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny misoroka ny sasany amin'ireo tsy fahalavorariana azo avy amin'ny tsy fahalalana izay holazaina amin'ny olona iray.
Hanana kofehy vitsivitsy ianao ary io dia afaka manampy amin'ny famakiana ny ranomandry ao anatin'ireo minitra vitsy voalohany.
4. Tantano ny zavatra antenainao.
Raha nahita sarin'olona vitsivitsy ianao ary niresaka taminy an-tserasera, dia mety ho mora ny mamorona sarin'io olona io ao an-tsainao.
Fa ny zavatra hitanao sy vakianao amin'ny Internet dia tsy mandika ny tena tontolo.
Indraindray dia miova fa ilay tsipika izay noheverinao fa tsapanao dia tsy nisy.
Aza avela hametraka ny fanantenanao avo loatra ny zavatra niainanao virtoaly. Tantano fotsiny ireo antenaina ireo ary tazomy hifehezana izao ny eritreritrao sy ny fahatsapanao.
5. Mivory amin'ny volanao manokana.
Rehefa sambany mihaona amin'ny olona iray ianao, maninona raha manolo-kevitra any an-toeran-kafa fa tsy avelanao ho azy ireo izany?
Misafidiana toerana nisy anao taloha ary mahatsapa fa ao an-trano. Amin'izay ianao dia hahafantatra ny lalanao manodidina ary hahatsapa ho mahazo aina kokoa.
Ny sipa dia mandainga amiko momba ny zavatra kely
Ny fahafantarana zavatra madinidinika, toa tsy dia misy dikany loatra toa ny tianao handidiana ny menio, na ny toerana misy ny fandroana, dia afaka manome toky anao ary hampiato anao tsy hahatsapa ho tsy dia salama… na manahirana anao raha tsy izany.
Raha manana fepetra takiana amin'ny sakafo ianao, dia tena zava-dehibe izany, satria afaka misafidy toerana tianao indrindra izay mifanaraka amin'ny filanao ianao, saingy fantatrao fa mbola tian'izy ireo izany.
6. Alao antoka fa toerana ho an'ny besinimaro io.
Na aiza na aiza no hanapahanao hevitra momba ny daty, alao antoka fa misokatra sy be atao izy io.
Ny ankamaroan'ny olona amin'ny tranonkala mampiaraka dia tena marina sy mendri-pitokisana, saingy tsara kokoa ny mitandrina mba tsy ho sambatra ianao.
7. Avelao ny olona hahafantatra hoe ho aiza ianao.
Lazao amin'ny olona atokisanao ny alehanao ary iza no miaraka sy manamarina miaraka amin'izy ireo aorian'ny nanombohan'ny daty hampahafantarana azy ireo fa mandeha tsara daholo izy rehetra.
Raha ny tena izy, raha ny amin'ny filaminana no resahina, dia tandremo ny fepetra rehetra tokony hataonao rehefa mifanena amin'ny olon-tsy fantatra ianao ary ampiasao ny sainao.
8. Tehirizo amin'ny kafe izany.
Raha te hanao ny fivoriana ivelan'ny besinimaro anao ho toy ny mahazatra ianao alohan'ny hahalalanao raha mety hisy fisarihana tantaram-pitiavana eo aminao, dia azonao atao ny manoro hevitra ny fihaonana amin'ny kafe / dite sy mofomamy.
Ny daty tahaka itony dia tsy maharitra mihoatra ny adiny iray mahery eo ho eo, ary fomba tsara hahatsapana olona mivoaka sy mamaky ranomandry nefa tsy manao sorona hariva, izay tsara raha manana fandaharam-potoana be atao ianao.
Tsy misy koa ny hafahafa amin'ny fiezahana hamantatra raha misotro fotsiny ianao na misakafo hariva koa.
9. Afangaro amin'ny hetsika iray ny zavatra.
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny olona amin'ny fiarahamonina tandrefana maoderina, azo atao ny manao daty nefa tsy misotro.
Raha tokony hihaona amin'ny kafe na bar ianao, maninona raha mieritreritra kely ivelan'ny boaty ary manome daty miasa?
Ny safidy nosokafanao ho anao dia miankina amin'ny toerana misy anao sy ny zavatra mahaliana anao.
Ny zavatra mahafinaritra momba ny fihaonana amina olona amin'ny Internet dia ny tokony hahafahanao mamantatra izany, farafaharatsiny amin'ny ampahany, avy amin'ny mombamomba ny fiarahan'izy ireo sy ireo resaka nifanaovana nataonao.
Raha manahy ianao fa mety tsy hahatratra ny hetsika heverinao fa izy ireo dia avelao amin'ny daty faharoa ary mandehana amin'ny endrika daty voalohany mahazatra.
10. Atombohy amin'ny fisotroana.
Raha misafidy fihaonana hariva ianao dia araho ny fenitra protokolan'ny daty voalohany ary esory amin'ny zava-pisotro ny zavatra.
tsy haiko izay tadiaviko amin'ny fiainana
Amin'izany fomba izany, raha tsy tsapanao izany dia tsy voatery hanao takariva feno izany ianao na handany vola be amin'ny sakafo.
11. Fa alao antoka fa mihinana ianao.
Raha handeha hisotro zava-pisotro ianao, dia eritrereto ny hihinana sakafo hariva alohan'ny handehananao hariva, fa tsy hiandrasana hahitana raha handeha hihinana ianareo roa.
Rehefa dinihina tokoa, dia afaka mihinana indroa foana ianao, fa ny zavatra farany tadiavinao dia ny mahita tampoka fa nisotro zava-pisotro vitsivitsy tamin'ny vavony foana ianao.
Tsy misy maharatsy tanteraka ny mahazo tipsy, fa angamba tsy te-ho mamo be eo akaikin'ny olona vao nifankahita ianao, ary ny 'mamo-ianao' dia mety tsy handray fanapahan-kevitra tsara indrindra.
ny fomba hahazoana fanajana amin'ny fifandraisana
12. Tongava ara-potoana.
Ny fotoana ara-potoana no zava-dehibe kokoa noho ny tamin'ny daty voalohany, satria ny taraiky dia mety hanoro hevitra azy ireo fa tsy manome lanja ny fotoanany ianao mba hipoitra rehefa milaza ianao fa hanao izany.
Fanampin'izay, tsy misy olona tia miandry daty manodidina, manontany tena raha efa nitsangana izy ireo. Raha somary tara ianao dia ataovy izay hampahafantarinao azy ireo.
13. Hamarino tsara fa mihaino tsara ianao.
Zava-dehibe ny fifampiresahana amin'ny daty voalohany, fa mitovy ihany koa ny lanjany tsy hanjakazakan'ny resaka ary avelao hiresaka koa izy ireo.
Rehefa miresaka izy ireo dia alao antoka fa omenao azy ireo ny sainao manontolo.
Mametraha fanontaniana izay mampiseho fa liana marina ianao amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny zavatra lazain'izy ireo aminao.
14. Sasao ny volavolan-dalàna.
Mbola lohahevitra mampiady hevitra ity ary ny hevitra dia miovaova arakaraka ny kolontsaina sy ny kolontsaina, saingy ao amin'ny bokiko dia tokony haparitaka eo afovoany ny zava-drehetra.
Raha tsy hoe, mazava ho azy, ny datinao dia nitondra anao tamina toerana mahafinaritra sy nandidy tavoahangy champagne, ary raha izany dia ekena izy ireo handoa izany.
Azonao atao ihany koa ny manao boribory, amin'ny iray mividy ny fisotroana voalohany, ary ny iray kosa mahazo ny fihodinana faharoa raha toa ka mandeha tsara ny elanelanao.
Na inona na inona maha-lahy na maha-vavy anao, dia fanazaran-tena tsara ny fividianana zava-pisotro voalohany raha ianao no manontany an'ilay olona hafa.
Raha manahirana ny vola, izany no antony tsara hafa hisafidiananao ny toerana mifanena aminao, satria afaka misafidy any ho any ianao miaraka amin'ireo safidy mahasoa ny tetibola.
15. Afaka miala foana ianao.
Tsy mahalala fomba toa ny toa azy, raha tonga amin'ny daty ianao ary mazava aminao avy hatrany fa tsy misy zavatra iraisanareo roa, na mahatsapa tsy mahazo aina mihitsy ianareo, dia ao anatin'ny zonareo ny miala.
Aza tsy mahalala fomba (raha tsy hoe nanao zavatra mendrika azy ireo izy ireo), nefa lazao azy ireo am-pilaminana sy am-panajana fa nahafinaritra ny nihaona tamin'izy ireo, saingy mieritreritra ianao fa handeha hody.
Tsy tokony mila manao fialantsiny ianao, satria tokony ho lehibe daholo isika rehetra hanaiky fa tsy ny olona rehetra no ho tia antsika.
Raha hitanao fa manahirana loatra izany, dia azonao atao foana ny miverina amin'ny paikadin'ny mahazatra ny fananan'ny mpiray trano aminao hilaza aminao fa tondraka ny lakozia, na inona izany.
Fantaro fotsiny fa mety hahita mahitsy amin'ny alalàn'ny fialantsiny ny datinao.
Na eo aza ny tsy mahazo aina manapaka daty fohy dia mety, tsy misy dikany ny fandanianao ny fotoanao na ny azy raha hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny teny go ianao.
16. Izany dia momba ny fomba fijerinao azy.
Ny olona sasany mahita fa mampihena kely ny raharaha mampiaraka amin'ny Internet. Tsy afaka mino izy ireo fa voatery mandany ny fotoanany amin'ny fampiharana ary manana salan'isa daty voalohany mba hahitana olona miavaka.
Ary raha mijery toy izany ianao dia mazava ho azy fa tsy hankafy azy ianao.
Fa kosa, jereo ny daty tsirairay ho fotoana mahafinaritra hivoahana sy hihaona ary hihaona amin'ny olona vaovao.
Aza miditra amin'ny fanantenana be, na fanantenana kely, manantena fahafinaretana fotsiny. Ary raha tsy izany dia tsy mila mahita azy ireo intsony ianao. Tsotra toa izany.
17. Aza lazaina ny taloha.
Toy ny daty voalohany, aza miala amin'ny firesahana ny taloha.
Ny fanavakavahana an'io dia mety ho raha vao tena vao haingana ny fisarahana ary tsapanao fa misy vaovao tokony hahafantatra fa mbola vaovao ianao avy amin'ny fiarahanao taloha.
Na raha misy zavatra hafa momba ny fifandraisanao taloha dia tsapanao fa tokony ho fantatr'izy ireo hatramin'ny voalohany.
18. Mandehana miaraka amin'ny onja.
Ny olona sasany dia te-hanapa-kevitra amin'ny lalàna henjana toy ny tsy fanorohana mihitsy amin'ny daty voalohany - andriamanitra tsy tokony hanao zavatra hafa intsony - saingy tsy mino aho fa tena manampy ireo fitsipika ireo.
Mandehana fotsiny amin'ny onja. Raha mandeha tsara ny raharaha, ary te hanitatra ny daty ianao na hanoroka azy ireo (raha mazava fa te hanoroka anao izy ireo), na zavatra hafa maka ny fanirianao dia ataovy izany.
tsara ny zavatra atao ho an'ny namana tsara indrindra
Indray mandeha monja ianao no velona, ​​ka henoy ny fihetseham-ponao sy ny tsinainao, ary nitarika ny toe-po sy ny fitondran-tenanao mampiaraka anao hitarika anao.
Tsy fantatrao mihitsy hoe aiza no mety hitondran'ny hariva anao.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hanatonana ny daty voalohany aorian'ny fihaonana amin'ny olona amin'ny Internet? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Rahoviana ary inona no handefasana hafatra aorian'ny daty voalohany
Firy ny daty dia efa ampy alohan'ny hahatongavan'ny firaisana tsy manam-paharoa?
Zavatra 7 tadidio raha mbola tsy nanao firaisana na daty ianao
ny karazana fihainoana fototra indrindra dia ny
spelling tori vadin'i charlie shanian
ny fomba fahalalana bandy tsy liana aminao
brock lesnar vs romana manjaka ady 34
inona no tena mahaliana ny olona
famantarana ny fihenjanana ara-nofo avy amin'ny lehilahy